AFRIKADA DHEXE: 146 Qof Muslimiin Ah Oo Lagu Dilay Xasuuq Hor leh .
Thursday October 19, 2017 - 12:39:25 in Wararka by Super Admin
Wadanka Afrikada dhexe waxaa wali kasii socda gummaadka ka dhanka ah dadka muslimiinta xilli boqolaal kun oo qoys guryahooda isaga Barakaceen.
Warbaahinada caalamiga ah ayaa aad u hadal haysa fal wuxushnimo hor leh oo maleeshiyaatka Kirishtanka ah si bareer ah uga geysteen Afrikada dhexe kuna dileen dad aad u fara badan oo ka mid ah Muslimiinta laga tirada badan ee ku dhaqan dalkaasi.
Warbaahinadan oo soo xiganaya ilo wareedyo maxalli ah ayaa tilmaamaya in maleeshiyaatka kIrishtanka ah ee Anti-Balaka ay dileen ugu yaraan 146 ruux oo muslimiin ah ka dib xasuuq ba’an oo ay ka geysteen qeybo ka mid ah deegaanada ay ku nool yihiin Muslimiinta fara ku tiriska ah ee ku dhaqan dalkaasi.
Shabakadda Al-Jazeera oo soo xiganaya ilo wareedyo gudaha ah ayaa sheegtay in la dilay ugu yaraan 146 ruux oo ka mid ah Muslimiinta Afrikada dhexe kadib markii maleeshiyaatkan ay weerar xooggan ku qaadeen deegaan lagu magacaabo Bonboole oo ku yaall waqooyiga magaalada caasimada ah ee Baangii.
Wariyaha Al-Jazeera Fadli Cabdi Risaaq ayaa xaqiijiyay in weerarka uu dhacay arbacadii la soo dhaafay xilligaas oo maleeshiyaatka Nasaarada ee ku badan dalkaas ay ku duuleen tuulada ayna dileen tiro aad u badan oo Muslimiinta ka mid ah sababo ku aaddan maqnaashiyaha awood caalami ah oo ka tirsan quwadaha halkaas jooga oo ilaalisa Muslimiinta.
Wuxuu sidoo kale sheegay in sanadkan uu aad u kordhay gummaadka iyo weerarada lagu beegsanayo Muslimiinta tirada yar ee ku nool Afrikada dhexe, isagoona tilmaamay in maleeshiyaatka nasaarada ee fuliyey weerarkan ay ahaayeen isla kuwii maalma ka hor 25 ruux ku dilay masjid ku yaalla deegaanka Koombi ee wadankaasi.
Kumanaan katirsan Ciidamada Jinsiyadaha kala duwan leh ee ku sugan Q.Midoobe ayaan xil iska saarin ka hortagga weerarada ka dhanka ah dadka muslimiinta ah